Koa satria sahirana amin'ny tena izy isika, dia tsy mila hanome ny herintsika sy ny herintsika ho an'ny diso.
Ireo lahatsoratra be mpamaky indrindra amin'ny andro Alahady 28 jona 2020. Sary: Ny andro.
Tsy hiteraka korontana sy marika fanontaniana ihany ny adihevitra fa tsy isa miantso. Fa kosa, tokony hampidirintsika ny saintsika sy ny herintsika ho fanomezana izao tontolo izao an'i Jesosy Kristy.
Fanadihadiana momba ny Knutby
Ny Andron'ny gazety isan'andro isan'andro dia ahitana lahatsoratra sy adihevitra be momba ny zava-nitranga tao Knutby sy ny anton'izany.
Ireo lahatsoratra be mpamaky indrindra "anio" dia adihevitra momba an'i Knutby nosoratan'ny mpanoratra isan-karazany.
Misavoritaka bebe kokoa
Fa nahoana ny olona no tokony hampiditra ny heriny sy ny heriny ho amin'izany? Tsy hiteraka korontana sy marika fanontaniana ihany ny adihevitra fa tsy isa miantso.
Fa kosa, tokony hampidirintsika ny saintsika sy ny herintsika ho fanomezana izao tontolo izao an'i Jesosy Kristy.
Ho reraka fotsiny isika ary tsy misy marika fanontaniana hapetraka raha toa ka sahirana amin'ny tsy niantso isika isika.
Vecka 25, tisdag 22 juni 2021 kl. 13:21